हेलो ‘बदनाम अख्तियार’ – esetokhari.com
हेलो ‘बदनाम अख्तियार’
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात समेतको सेटिङ्ग, पुर्वअख्तियार प्रमुख डिल्लीबजार खोरमा
२०७७ मंसिर २९, सोमबार १०:०२
नेपालगन्ज : ‘भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य, सुशासनका लागि अपरिहार्य’ मुलमन्त्रका साथ अघि बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान अयाोग यतिबेला बदनामीको अखडा बनेको देखिएको छ ।
यतिबेला अख्तियारकै प्रमुखदेखि कर्मचारी आर्थिक लालचामा फसेको र नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक वा पदीय भ्रष्टाचारले ग्रसित भैरहेको खसलेको छ । यसले पनि अख्तियारको गरिमामा आँच आएको छ । अख्तियार बदनामी भैरहेको आम नागरिकलाई महशुस भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोऐनकै अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट उलल्घन भैरहेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सस्तो लोकप्रियताका नाममा ‘स्टिङ अप्रेसन’ जस्तो अनुसन्धानको गम्भीर अस्त्रलाई हल्काफुल्का रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । अख्तियारले यतिबेला यसलाई झन् व्यापक बनाइरहेको छ। एक हजार घूस समाउन समेत अख्तियार आफैंले रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ को नाटक मञ्चन गर्दै आएको छ ।
अख्तियारले गरिरहेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ ले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने र त्यसबापत रकम उपलब्ध गराउने कार्य राज्यको संवैधानिक निकायले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
अख्तियारले गरिरहेको यस्तो अभ्यास नेपालको प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुकूल छ त ? यतिबेला आम जनमानसमा प्रश्न उठिरहेका बेला ललिता निवास काण्डमा अख्तियारका पुर्वप्रमुख तानिनु र जलेल हालिनुलाई थप चासोक ासाथ हेरिएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्‍त दीप बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । विशेष अदालतले हाजिर भएका उनलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेय बताउँछन ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इलजासले बस्नेत आरोपित देखिने भएकाले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
बस्न्यात अख्तियारको आयुक्त हुनुअघि तत्कालिन समयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव थिए । त्यही बेला उनले ललिता निवाससम्बन्धी फाइलको टिप्पणी उठाउने, सही गर्ने काम गरेका थिए । उनीविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो माग गरी २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले बस्नेतसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये ११० जनालाई भ्रष्ट्राचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । विशेषले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका बस्नेत दोस्रो अभियुक्त हुन् । यस घटनाले पनि अख्तियारमाथि प्श्न उठाएको छ ।। यसलाई बदनामी बनाएको छ । अब अख्तियारमाथि नै निगरानी गर्नुपर्ने समय आएको छ ।